ကျန်းမာရေးနှင့် ဝူရှူးပညာ - Thaing Wizard
Posted on October 18, 2013 by athtet
By Ko Yan Lin
(ခုတစ်လော ebook အသစ်တွေ မတင်နိုင်သေးတာနဲ့ ဆောင်းပါးလေးတွေပဲ တင်ပေးဖြစ်နေတယ်ဗျာ။ ဒီကနေ့တော့ ကိုရန်လင်း ရေးခဲ့တဲ့ ကျန်းမာရေးနှင့် ဝူရှူးပညာ ဆိုတဲ့ ဆောင်းပါးလေးကို ပြန်လည်မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်။ ရေးထားတာတော့ ကြာပါပြီ။ ၂၀၁၁ တုန်းက ning website တစ်ခုမှာ ဖတ်ဖူးခဲ့တာပါ။ ကိုရန်လင်းဆီမှာ Thaing Wizard မှာ ပြန်တင်ဦးမယ်လို့ ခွင့်တောင်းထားတာတောင် အတော်ကြာပါပြီ။ တင်မယ်၊ တင်မယ်နဲ့ ခုမှပဲ လုပ်ဖြစ်တော့တယ်ဗျာ။ ဒီဆောင်းပါးလေးကို နှစ်သက်ကြလိမ့်မယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်ဗျာ။)
Wushu For Health
– ဒီပို့စ်လေးကိုရေးရတာလည်း သူငယ်ချင်းများ ဝူရှူးပညာနှင့် ကျန်းမာရေးကို ပျော်ရွှင်စွာ လေ့လာ လိုက်စားပြီး အသက်ရှည်ကာ အနာကင်းစေဖို့ ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ပါ။ ဝူရှူးပညာဟာ လူပျင်းတို့ လေ့ကျင့်လို့မရတဲ့ပညာမျိုးပါ။ အင်အားသည် ကွန်ဖူး၏ရေသောက်မြစ် အင်အားမဲ့သော သိုင်းပညာသည် ဟန်ရေးပြပဲရှိပါမည်။ ဝူရှူးလေ့ကျင်ခြင်းသည် အင်အားနှင့် လျှင်မြန်ကျွမ်းကျင်မှုကို တိုးမြှင့်ပေးခြင်းဖြစ်သည်ဟု ကွန်ဖူးဘုရင် လီရှောင်လုံ (Bruce Lee) က ပြောခဲ့ပါသည်။
– ဝူရှူးဆိုတာကတော့ ကိုယ်ခံပညာရပ်အားလုံးကို ပြောတာပါ။ တိုက်ခိုက်ရေး အတတ်ပညာလို့ အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်။ ဒါပေမယ့် တိုက်ခိုက်ရေးအတွက်သက်သက်လည်း မဟုတ်ပါဘူး။ လေ့ကျင့်ခန်းရဲ့ လှုပ်ရှားမှုက ကျန်းမာရေးကို အထောက်အကူပြုစေပါတယ်။
– တရုတ်ကွန်ဖူးကိုမှ ဝူရှူးပညာလို့ ပြောတာမဟုတ်ပါဘူး အားလုံးသော ကိုယ်ခံပညာရပ်များကိုပြော တာပါ။ ကိုယ်ခံပညာဆိုတာလည်း ကိုယ်ခံရတာသက်သက်တော့ မဟုတ်ပါဘူး။ ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ ခံတပ်ဖြစ်တဲ့ပညာရပ်ပါ။
– ဝူရှူးမှာ အပျော့နဲ့ အမာဆိုပြီးရှိပါတယ်။ အမာဆိုတာကတော့ ပြင်ပအားသုံး တိုက်ခိုက်ရေးပညာ များဖြစ်ပြီး အပျော့ဆိုတာကတော့ ချိ (အတွင်းအား) ကိုပြောတာပါ။ ဥပမာ- မြန်မာ့လက်ဝှေ့တို့ ကရာတေးဒိုတို့ဟာ အမာသိုင်းများပါ။ ထိုက်ကျိချွမ်၊ ရှင်းယီ၊ ပါးကွ တို့ကတော့ အပျော့သိုင်းမျိုးများပါ။ အပျော့နဲ့ အမာဟာ အဖို၊ အမဓါတ်ဖြစ်ပြီး တွဲနေမှလည်း သဘာဝကျပါတယ်။ ကွဲနေရင် မပြီးပြည့်စုံပါဘူး။ အမာသိုင်းသက်သက် လေ့ကျင့်ပြီး အပျော့ဓါတ်နည်းနည်းမှ မပါရင် ကြာလာတဲ့အခါ ကိုယ်လက်နာကျင်ပြီး ဒဏ်ပြန်ထတာမျိုး ခံစားရတတ်ပါတယ်။ ဥပမာ- ကျွန်တော်တို့မြင်တွေ့နေရ တဲ့ မြန်မာလက်ဝှေ့သမားဟောင်းကြီးများ အိုလာတဲ့အခါ ကိုယ်တွေလက်တွေနာတယ်လို့ မကြာခဏပြောတာကြားရသလိုပါ။ တစ်ချို့ တရားထိုင်ပြီး အပျော့ဓါတ် ရရှိသူတွေတော့ ကျန်းမာကြပါတယ်။ ပထမဦးစွာ ချိ (အတွင်းအား) လေ့ကျင့်နည်းကို ကျနော်သိသလောက်ပြန်တင်ပြ ပါ့မယ်။
အဆင့်(၁) ခန္ဓာကိုယ် ပြန်လည်ကျန်းမာခြင်း လေ့ကျင့်စဉ်
– ဒီလေ့ကျင့်ခန်းကို တရုတ်လို ခမ်းဖုကုန်းလို့ခေါ်ပါတယ်။ ငယ်စဉ်ကရှိခဲ့တဲ့ ချိ (အသက်စောင့်ဓါတ်) ဟာ အသက်အရွယ် ကြီးလာတဲ့အခါ တဖြေးဖြေးချင်း လျော့နည်းလာပြီး ကျင်းလုလို့ခေါ်တဲ့ ချိဓါတ်သွားရာလမ်းကြောင်း ပျောက်ကွယ်လာတတ်ပါတယ်။ ဒီလေ့ကျင့်စဉ်က ချိဓါတ်သွားရာ လမ်းကြောင်းပြန်ဖွင့်ပေးတဲ့ လေ့ကျင့်ခန်းပါ။ မတ်တပ်ရပ်လျက်ဖြစ်စေ ထိုင်ခုံပေါ်မှာ ထိုင်ပြီး ဖြစ်စေ လေ့ကျင့်နိုင်ပါတယ်။
– ရှေးဦးစွာ မျက်လုံးမှိတ်ပြီး အသက်ကို ဖြေးဖြေးမှန်မှန်ရှူပါ။ စိတ်ထဲမှ မိမိခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးရှိ ပိုက်ကွန်ယက်ပုံ အတွင်းအားသွားရာ လမ်းကြောင်းကိုပုံဖေါ်ပါ။ အသက်ရှူသွင်းချိန် မှာ ခြေဖဝါးအလယ်ရှိ ယုံချွမ်သွေးပေါက်မှ ငယ်ထိပ်ရှိ ပိုင်ဝှေးသွေးပေါက်သို့ လမ်းကြောင်းအတိုင်း ရွှေဝါရောင်အတွင်းအားအဖြစ် စီးဆင်းပေးပါ။ ရှူထုတ်ချိန်မှာတော့ ငယ်ထိပ်ကနေ ခြေဖဝါးကို ပြန်စီးဆင်းပေးပါ။ တစ်ခေါက်လျှင် ၁၀-ကြိမ်မှ အကြိမ်-၁၀၀ အတွင်း တစ်နေ့-၃-ခေါက် မှန်မှန်လေ့ကျင့်ပါက ၁-လခွဲမှ ၃-လအတွင်း ကျန်းမာရေး သိသိသာသာ ကောင်းမွန်တိုးတက်လာပြီး သာမန်ထက် ပိုမိုလန်းဆန်းလာမှာပါ။ (မှတ်ချက်… ဆေးလိပ်ရှောင်နိုင်လျှင် ပိုကောင်းပါသည်)။
အဆင့်(၂) ချိ (အတွင်းအား) စုစည်းခြင်းကျင့်စဉ်
– ဒီလေ့ကျင့်ခန်းကိုတော့ တရုတ်လို ချိကုန်းလို့ ခေါ်ပါတယ်။ စင်္ကြာဝဠာနဲ့ ပထဝီရဲ့အားကို စိတ်နဲ့ညှို့ယူတဲ့လေ့ကျင့်စဉ်ပါ။ စိတ်တည်ငြိမ်ပြီး လေ့ကျင့်မှုအားကောင်းရင် ၁-နှစ်ကျော် ကာလအတွင်း သိသာလာပါလိမ့်မယ်။ သက်တောင့်သက်သာထိုင်ပြီး လေ့ကျင့်နိုင်ပါတယ်။ မျက်လုံးမှိတ်ပြီး စိတ်တည်ငြိမ်စွာ လေ့ကျင့်နိင်လျှင် ပိုကောင်းပါတယ်။ လေ့ကျင့်စဉ်အချိန်မှာ ပူပင်မှုတွေကို အားလုံးမေ့ပျောက်နေစေရပါမယ်။ အသက်ရှူသွင်းနေစဉ် စင်္ကြာဝဠာမှ အတွင်းအားနှင့် ကမ္ဘာမြေမှ ပထဝီအတွင်းအားတို့သည် ဝင်လေနှင့်အတူ ခန္ဓာကိုယ်အတွင်း စီးဝင်လာပြီး ချက်အောက်လက်-၂-လုံးခန့်အကွာအဝေးရှိ ထျန်းကျင်သွေးပေါက်မှာ စုစည်းပေးပါ။ ပြန်ပြီးရှူထုတ်စဉ် ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းရှိ မကောင်းသော အညစ်အကြေးများ လေနှင့်အတူ ပါသွားစေရပါသည်။ စိတ်တန်ခိုးသုံးလေ့ကျင့်စဉ်ဖြစ်သဖြင့် စိတ်တည်ငြိမ်ပြီး လေ့ကျင့်အား ကောင်းလျှင်ကောင်းသလို အကျိုးရှိပါသည်။ လေ့ကျင့်ရင်း ချက်အောက်နေရာမှ ပူလာမှန်းသိပါက မိမိမှာရှိသောချိဓါတ် သည် သေချာပြီဖြစ်ကြောင်း သိလာရပါမည်။
အဆင့်(၃) ခန္ဓာကိုယ်အနှံ့ အတွင်းအား ဖြန့်လွှတ်ခြင်း လေ့ကျင့်စဉ်
– ချက်အောက်မှအတွင်းအားရှိလာပါက ဆီးခုံနှင့်မူလနေရာ ဖြေးဖြေးချင်း အသွားအပြန်ပို့လွှတ်ပေးပါ။ ရက်အနည်းငယ်ကြာလို့ အောင်မြင်လာပါက မြီးညှောင့်ရိုးအထက်ရှိ ဝေလွီသွေးပေါက် သို့ ရောက်အောင်ထပ်ပြီး ကျင့်ရပါမည်။ တစ်နေရာကို သေသေချာချာရောက်မှ အဆင့်တက်ရပါမည်။ ရပါက ဆက်လက်ပြီး အခြားသွေးပေါက်များဖြစ်သည့် ကျော၊ လည်ကုတ်၊ နောက်စေ့အောက်၊ ငယ်ထိပ်၊ မျက်ခုံးကြား၊ မေးစေ့၊ လည်ပင်း၊ ရင်ဘတ်အထက်၊ ရင်ဘတ်အလယ်၊ အရှိုက် တို့အထိ ပို့ဆောင်ပေးရပါမည်။ နောက်ဆုံး မူလနေရာအထိ ရောက်ပါက လေ့ကျင့်မှု ပထမအဆင့်အောင်မြင်ပါပြီ။ ဒီအတိုင်း အသွားအပြန်ရအောင် လနဲ့ချီကျင့်နေရပါမည်။ မည်သည့်အချိန်မဆို အတွင်းအားထုတ်ပြီး ရွေ့လျားနိုင်မှ လေ့ကျင့်ခန်းနောက်တစ်ခုကို ဆက်ရပါမည်။ ပုခုံးရှိ(ကျင်ကျန်)သွေးပေါက်၊ လက်မောင်း(ချွီးချီ)၊ လက်ဖျံ(လေ့ကွမ်း) နှင့် လက်ဖဝါးရှိ(လောက်ကုန်း)သွေးပေါက်တို့အထိ ပို့ဆောင်ပေးရပါမည်။ လက်ဖဝါးအထိပို့နိုင်ပြီဆိုပါက အပေါ်ပိုင်းခန္ဓာကိုယ်အတွက် အောင်မြင်ပါပြီ။ ဝဋ်နာကံနာမှလွဲ၍ တော်ရုံတန်ရုံရောဂါသည်များအား အတွင်းအားပြောင်းအားလွှဲနည်းဖြင့် ကုသပေးနိုင်ပါလိမ့်မည်။
– ကုသပေးနည်းမှာ လက်ဖဝါးမှ အတွင်းအားကို ဝေနာရှင်အား ဝမ်းဗိုက်မှ ပို့လွှတ်ရပါသည်။ မိမိစိတ်နှင့်လည်း ခန္ဓာကိုယ်အနှံ့ ပို့လွှတ်ပေးပါ။ သို့ပေမယ့် အသားချင်းမထိပါစေနှင့်။ ထိမိက ဝေဒနာရှင်မှာ သာမန်လူဖြစ်၍ အတွင်းအားကို တစ်နေရာတည်းမှာ ချက်ချင်း အလုံးအရင်းလိုက် လက်ခံရသောအခါ ရောဂါမပျောက်ဘဲ ဆရာဝန်တို့ ၆-နှစ်လောက် ကုလို့မပျောက်တဲ့ အတွင်းဒဏ်ရာ ရတတ်ပါသည်။ ဒါကတော့ ကျွန်တော်ကြားဖူးတာပါ။
– ကျွန်တော်အားတဲ့အခါ တိုက်ခိုက်ရေးသုံးအတွင်းအားလေ့ကျင့်နည်းကိုလည်း မျှဝေဖို့ဆန္ဒရှိပါသည်။
စာရိုက်မကျွမ်းသောကြောင့် ဒီဘလော့ကိုတောင် ၂-ရက် ရေးခဲ့ရပါသည်။ စာအုပ်ကြည့်ခိုးချခြင်း မဟုတ်သည့်အတွက် စာလုံးပေါင်းသတ်ပုံနှင့် စာစီမကျခြင်းများကိုတော့ နားလည်ပေးပါ။ မှားနေတဲ့နေရာရှိပါကလည်း အားမနာစတမ်းထောက်ပြခဲ့ကြဖို့ တောင်းဆိုပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့မှာ အမေဘက်ကပါတဲ့ မျိုးရိုးလိုက်ဆရာဝန်ကုလို့ မပျောက်တဲ့ရောဂါရှိပါတယ်။ ကျွန်တော်ခံရမခံရ ဆိုတာတော့ မသေချာပါဘူး။
– အဲဒီရောဂါဖြစ်လာခဲ့ရင်တောင် သာမန်လူတစ်ယောက်လောက် ရပ်တည်နိုင်အောင် ဒီပညာကို ကျွန်တော်ငယ်ငယ်တည်းက အသည်းစွဲခဲ့တာပါ။
– ဒါေပမယ့္ ခက္ခက္ခဲခဲ ဆရာ႐ွာခဲ့ရပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ့္လို ၀ါသနာပါသူမ်ား ကၽြန္ေတာ့္လို ဆရာ႐ွာမခက္ၾကဖို႔ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္။ မိမိပညာ ေၾကာင္လက္သည္ဖြက္ လွ်ိဳ႕၀ွက္တစ္ကိုယ္ေကာင္း ဆန္ၿပီး ပညာကို ေသရြာယူမသြားခ်င္လို႔ကတစ္ေၾကာင္း၊ ၿပီးေတာ့ ဆရာေတာ္ဦးသုမဂၤလရဲ႕ ဆံုးမစကားလို ပညာကိုေရာင္းစားတဲ့ ပညာသည္ မျဖစ္ေစဘဲ မိမိပညာကို ႐ွင္သန္ေနေစတဲ့ ပညာ႐ွင္တစ္ေယာက္ ျဖစ္ဖို႔ႀကိဳးစားေနျခင္းကတစ္ေၾကာင္းတို႔ေၾကာင့္ စာ႐ိုက္မကြ်မ္းသည့္ၾကားက လက္ေညာင္းခံ အခ်ိန္ကုန္ခံ မွ်ေ၀ေပးတဲ့ ကၽြန္ေတာ့္ေစတနာကို ၀ါသနာရွင္မ်ား နားလည္လက္ခံရင္ ကၽြန္ေတာ္ေရးရက်ိဳးနပ္ပါၿပီ။
– ဒါပေမယ့် ခက်ခက်ခဲခဲ ဆရာရှာခဲ့ရပါတယ်။ ကျွန်တော့်လို ဝါသနာပါသူများ ကျွန်တော့်လို ဆရာရှာမခက်ကြဖို့မျှော်လင့်ပါတယ်။ မိမိပညာ ကြောင်လက်သည်ဖွက် လျှို့ဝှက်တစ်ကိုယ်ကောင်း ဆန်ပြီး ပညာကို သေရွာယူမသွားချင်လို့ကတစ်ကြောင်း၊ ပြီးတော့ ဆရာတော်ဦးသုမင်္ဂလရဲ့ ဆုံးမစကားလို ပညာကိုရောင်းစားတဲ့ ပညာသည် မဖြစ်စေဘဲ မိမိပညာကို ရှင်သန်နေစေတဲ့ ပညာရှင်တစ်ယောက် ဖြစ်ဖို့ကြိုးစားနေခြင်းကတစ်ကြောင်းတို့ကြောင့် စာရိုက်မကျွမ်းသည့်ကြားက လက်ညောင်းခံ အချိန်ကုန်ခံ မျှဝေပေးတဲ့ ကျွန်တော့်စေတနာကို ဝါသနာရှင်များ နားလည်လက်ခံရင် ကျွန်တော်ရေးရကျိုးနပ်ပါပြီ။
အထက်ဖော်ပြပါ ကျန်းမာရေးနှင့် ဝူရှူးပညာ ဆောင်းပါကို ebook အနေဖြင့် သိမ်းဆည်းဖတ်ရှုလိုပါက ဒီနေရာ မှာ Download ဆွဲပြီး ကူယူနိုင်ပါကြောင်း…
This entry was posted in Martial Arts Article, Meditation, Wushu and tagged ဆောင်းပါး, တရားထိုင်ခြင်း, ဝူရှူး by athtet. Bookmark the permalink.
2 thoughts on “ကျန်းမာရေးနှင့် ဝူရှူးပညာ”
myohtet on October 30, 2013 at 4:18 pm said:
သူငယ္ခ်င္း မင္းသိုင္း စာအုပ္ေတြလိုခ်င္ရင္ ငါဌားမယ္
Aung Thu Htet on October 31, 2013 at 9:41 am said:
ဟုတ္ ကၽြန္ေတာ့္မွာမရွိတဲ့စာအုပ္ေတြကို ငွားေပးမယ္ဆိုရင္ လိုခ်င္ပါတယ္။ ဒီလိုလုပ္ဗ်ာ။ ရႏိုင္မယ့္စာအုပ္နာမည္ေတြကို comment နဲ႔ျဖစ္ျဖစ္ thaingwizard@gmail.com ကို email ပို႔ၿပီးျဖစ္ျဖစ္ အေၾကာင္းျပန္ေပးပါလား။